China X6 mahitsy fanamboarana sy orinasa | Teknolo-pitsaboana miorina amin'ny porofo Hebei
1. Fomba telo, fampisehoana jiro aoriana ary fomba fandrefesana marina kokoa no zava-dehibe amin'ity vokatra ity.
2. Misy fomba fandrefesana mari-pana telo ho an'ny vatan'olombelona, ​​ny zavatra ary ny ao anaty.
3. Ny fampisehoana jiro telo loko dia mazava kokoa sy tsara tarehy.
4. Ny fandrefesana ny mari-pana tsy ifandraisana dia mitaky iray segondra monja handrefesana mora foana, ary ny fizahana sensor infrared dia miantoka ny fahombiazan'ny avo indrindra sy ny tsy fetezana ary 0.3 ° ambany.
5. Fampisehoana endri-tsoratra mainty amin'ny efijery lehibe. Ny fiaramanidina dia natao mifanaraka amin'ny fanaingoana ny olombelona, ​​ny tahony miolakolaka dia mampitombo ny fangejana ary ny mari-pana dia eo anelanelan'ny 32-42 degre.
6. Ny halaviran'ny fandrefesana dia manodidina ny 5CM, ny maripana ambany indrindra dia 32 degre ary 42 degre ny ambony indrindra. Ny lesoka dia 0.3.
1. Fandrefesana ny mari-pana amin'ny vatan'olombelona: refesina tsara ny maripanan'ny vatan'olombelona, ​​soloina ny thermometre merkiora nentin-drazana. Ny vehivavy te hanan-janaka dia afaka mampiasa thermometre infrared (thermometers amin'ny handrina) hanaraha-maso ny maripanan'ny basal amin'ny vatana amin'ny fotoana rehetra, firaketana ny maripanan'ny vatana mandritra ny ovulation, misafidy ny fotoana mety hitoe-jaza, ary refesina ny mari-pana hahitana ny vohoka.
Mazava ho azy, ny zava-dehibe indrindra dia ny hijerena raha misy tsy fatiantoka amin'ny hafanan'ny vatanao amin'ny fotoana rehetra, hisorohana ny aretina amin'ny gripa, ary hisorohana ny gripa-kisoa.
2. Fandrefesana ny hafanan'ny hoditra: refesina ny mari-pana ambonin'ny hoditry ny olombelona. Ohatra, azo ampiasaina amin'ny fametahana indray ny rantsambatana.
3. Fandrefesana ny mari-pana amin'ny zavatra: refesio ny mari-pana ambonin'ny zavatra iray, ohatra, azo ampiasaina handrefesana ny mari-pana amin'ny velaran'ny teacup.
4. Fandrefesana ny mari-pana amin'ny ranon-javatra: refesina ny mari-pana amin'ny rano, toy ny mari-pana amin'ny rano fandroan-jaza. Rehefa mandro ny zaza dia refeso ny mari-pana ao anaty rano, aza manahy intsony ny hatsiaka na ny mafana; izy io koa dia afaka mandrefy ny hafanan'ny rano amin'ny tavoahangy ronono hanamorana ny fanomanana vovo-dronono zaza;
5. Afaka refesina ny mari-pana amin'ny efitrano
1. Azafady mba vakio ny torolàlana momba ny fampiasana alohan'ny fandrefesana, ary tokony ho maina foana ny handrina, ary tsy tokony hosaronan'ny volo ny handrina (azafady ataovy ny fandrefesana amin'ny tontolo 10 ℃ -40 ℃) hahazoana antoka fa marina ny refy.
2. Ny mari-pana amin'ny handrina izay refesina haingana amin'ity vokatra ity dia natao ho an'ny referansa fotsiny ary tsy tokony hatao fototry ny fitsarana ara-pitsaboana. Raha misy mari-pana amin'ny vatana tsy mahazatra dia miangavy mba ampiasao thermometer ara-pitsaboana raha handrefesana bebe kokoa.
3. Arovy azafady ny solomaso mahatsapa ary diovy amin'ny fotoana izy. Raha miova be ny mari-pana amin'ny tontolo iainana dia mila apetrakao amin'ny fitaovana tianao handrefesana mandritra ny 20 minitra ny fitaovana fandrefesana, ary andraso izy hiorenany hifanaraka amin'ny mari-pana momba ny tontolo iainana alohan'ny hampiasana azy mba hahazoana sanda marina kokoa.
Manaraka: X6 volondavenona